Daqiiqado shir-jaraa'id oo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ah Maarso 17, 2020 - Mino Danmark
Daqiiqado shir-jaraa’id oo xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ah Maarso 17, 2020
17/03/2020 / COVID-19 oo loo yaqaano corona virus /
Kaqeybgaleyaasha: Raiisel wasaare Mette Frederiksen, wasiirka caafimaadka Magnus Heunicke, agaasimaha gudiga caafimaadka Søren Brostrøm, mid kamid ah wasaarada arimaha dibada & taliyaha booliska qaranka Torkild Fogde.
Raiisel wasaaraha ayaa bilaabaya iyadoo carrabka ku adkeynaysa halista: 82 ayaa hada isbitaal la dhigey, 18 ka mid ah waxa yaalaan qyebta daryeelka degdega ah, kuwaa oo ku dhowaad labalaabmay maalin. Sidaa darteed waa muhiim in aan jebinno silsiladda cudurka faafinaya. Sidaa darteed waxqabadyo cusub ayaa la soo bandhigayaa, bilaabmeya berri, 18/3 saacadu markey tahay 10ka ilaa iyo 30 Maarso:
– Lama ogolaan doono in la abaabulo oo la isu yimaado in ka badan 10 qof, gudaha iyo banaankaba, dhacdooyin dadweynaha ah. Goryaha macaal maaha in aad isoogu timaadiin in kabadan 10 qof.
– Dukaamada waxay leeyihiin shuruudo adag: waa inuu jiraa meel ku filan dadka dhexdooda, masaafad wanaagsan, macaamiisha waa iney awoodaan inay farahooda dhaqaan – taasna waxay quseysaa gudaha iyo dibeddaba.
– Dhamaan cayaaraha gudaha iyo xarumaha isboortiga waa iney xiraan, tusaale ahaan xarumaha jimicsiga, saloollada dharka lagu qurxiyo, meelaha dadk ay qoraxda ku qaataan, meelaha dadka laga duugo, sawir-qaadayaasha: guud ahaan shirkadaha xiriirka dhow la leh. Ma khusayso haddii ay tahay daryeel caafimaad.
– Goobaha lagu caweeyo, kafateeriyada shiishadaha, baararka, iwm. waa in la xiro.
– Dhamaan suuqyada waaweyn, meelaha daboolan waa inay xiraan – marka laga reebo dukaamada raashinka ee xarumaha.
– Dhamaan maqaayadaha, kafateeriyada, iwm. waa in la xiro – laakiin take away wali waa caadi.
– Deenishka oo dhan oo ka imanaya dalka dibaddaha waa inay ka baxaan liiska deenishka, haddii ay ku qoran yihiin diiwaangelintaas, waxana haboon in ay galaan karantiil 14 cisho.
Intaa waxaa sii dheer oo ay isku raaceen Heunicke, Brorstrøm iyo Fogde in ay adkeeyaan halista xaaladda. Oo ay hadda tahay in aan ku dhaqaaqno haddii aan yareyno cawaaqibka. Cidna kama tanaasuli karto masuuliyadiisa inuu raaco talooyinka Wasaaradda Caafimaadka, Raiisul
Wasaaraha ayaa carabka ku adkeeyay, gaar ahaan tixraaca dhalinyarada.
Mabda ‘ahaan, ra’iisul wasaaruhu waxay soojeedisey haddii aad ka shakisan tahay wax caafimaad la xiriira, sida inaad asxaabta qaar aad casho la yeelatid, waa inaad iska deysaa.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa markale u mahadceliyay cid kasta oo qeyb ka ah bulshada oo diyaar u ah.
Intaa waxaa sii dheer, ra’iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay xirmooyin cusub oo gargaar ah, oo loogu talagalay shaqaalaha, kuwa iskaa u shaqeysanaya iyo shirkadaha, in laga wada xaajoodo sida ugu horreysa berri oo dhex marri doonto xisbiyada baarlamaanka.
Booliisku waxay u joogi doonaan wax ka badan sidii caadiga ahayd si ay ugala taliyaan una hagaan muwaadiniinta.
Wasaaradda arrimaha dibedda ayaa ku qiyaastay in qaar ka mid ah deenishka ay wadamada dibeddaha ku xayirnaan doonaan; laakiin wuxuu ugu baaqayaa inay helaan meel ku habboon xayirnaantaas. Denmark baa sida ugu dhakhso badan ku soo celin doonta wadankan iyo guryahooda.
Du er her: Mino Danmark / Daqiiqado shir-jaraa’id oo xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ah Maarso 17, 2020